နီနီခင်ဇော် အောင်မြင်ချိန်မှာ အသိမှတ်မပြုခံရဘူး ဆိုတဲ့ ယုန်လေး - APANNPYAY
Home / အဆိုတော်များ / နီနီခင်ဇော် အောင်မြင်ချိန်မှာ အသိမှတ်မပြုခံရဘူး ဆိုတဲ့ ယုန်လေး
နီနီခင်ဇော် အောင်မြင်ချိန်မှာ အသိမှတ်မပြုခံရဘူး ဆိုတဲ့ ယုန်လေး
Apann Pyay 7:48 PM အဆိုတော်များ Edit
ညီမလေး နီနီခင်ဇော် သိစေရန် .
Melody World မှာဆုစမရခင်ထဲက 2007 2008 လောက်က Dinnerပွဲလေးတစ်ခုမှာ Jenny အသံကောင်းတယ်ဆိုပြီး မိတ်ဆက်ပေးလို့ ကျွန်တော်နဲ့စရင်းနှီးခဲ့ပါတယ်.
တွဲဆိုခဲ့ပါတယ်။ အသစ်ဆိုတာကို မယုံနိုင်အောင် တော်တော်ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ Show မှာဆိုဖို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
လိုက်ဆိုပေးပါတယ်။ ကျွန်တော် ဒီကောင်မလေး ထိပ်ဆုံးရောက်မယ်ဆိုတာသိပါတယ်။ သူဆုမရခင်ထဲက ပထမဆုံး Show ပထမဆုံး သီချင်း ကိုယ်ပိုင်သီချင်းတစ်ပုဒ် ကိုစလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Melody World စာချုပ် အရသာ သူတစ်ခြားသီချင်း အရင်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် ညီမအရင်းတစ်ယောက်လို အမြဲတန်းသူကို ပရိတ်သတ်သိဖို့ အောင်မြင်ဖို့ ခေါင်းထဲအမြဲထဲခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော် ညီမလေး အရင်လို အရမ်းချစ်ပါတယ်။
အန်တီ နီကိုလည်း အဒေါ်လိုချစ်ပါတယ်။ မိသားစုတွေပါ။
မိုးတိမ်ကဗျာကို မင်းအတွက် ၃ မှာထည့်ဖို့ အတွက် Ezy ကကျွန်တော် အစ်ကို ကိုကျော်ဇင်သိန်းကို အသည်းအသန်ပြောခဲ့ရပါတယ်။ အသံကြောင့် အဆိုတော်အသစ်ဖြစ်နေလို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆိုပြီးသားသီချင်း သီချင်းဟောင်းဖြစ်နေလို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ သူအသံနဲ့ လိုက်တာာရယ် အသံပါဝါ ကောင်းတာရယ်
ကြောင့် ပြန်ဆိုစေချင်တာပါ။ ရသ နဲ့ပဲ ပြန်တွဲပေးခဲ့ပါတယ်။ ရသ Rap လည်းအရမ်းကောင်းလို့ ။
နာမည်တွေတော့ ထည့်မပြောတော့ဘူး အဲ့ချိန်တုန်းက အောင်မြင်စပြုတော့မဲ့ အခု အောင်မြင်နေတဲ့ ကျွန်တော်ညီလေးတွေနဲ့ တွဲဆိုဖို့တွေလည်း
စီစဉ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဝင်ဆန့်အောင် . ဒီလောကမှာ ဘယ်လောက်တော်တော် တစ်ယောက်ထဲနေလို့မရပါဘူး။
အမြဲတန်း ကျွန်တော်နားမှာရှိတဲ့ လူတွေကို ကျွန်တော် တစ်ယောက်ထဲ အတွက်မရှင်သန်ခိုင်းပါဘူး။
သူတို့ အတွက်ပဲ သူတို့ကိုရှင်သန်ခိုင်းတာပါ။
*** ငါနဲ့ပဲ ဆိုရမယ်။ ဟိုလူ နဲ့ မဆိုရဘူး ဒီလူက နင်ကိုနင်းမှာတို့ အကျိုးအမြတ်ဘယ်လောက်ရမှာလဲတို့ နင် ကိုလာမှီပြီးသူတက်မှာတို့ *** လူစောက်မြင်ကတ်ပြီး မတက်ခင်ထဲကပြုတ်ကျမဲ့ အတွေးတွေ Psycho မထည့်ပေးခဲ့ပါဘူး အဲ့ဒါ လူတိုင်းကိုပါ ။Snare ကို ကိုစိုင်းထုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့လည်း လုပ်ရမယ် လုပ်ရမယ် ဆိုပြီး ထိပ်ဆုံးကပြောခဲ့တာပါ။ Snare နဲ့က အဲ့အချိန်တုန်းက တစ်အိမ်ထဲနေနေကျတဲ့ အခုချိန်ထိ အချစ်ဆုံးကောင်တွေပါ။
NiNi MRTV4ကရိုက်မယ့် Show တွေလည်း ပိုက်ဆံနည်းနည်း များများ လူနဲ့ သီချင်းနဲ့ တွဲ သိဖို့ ဆိုစေခဲ့ပါတယ်။
သူနဲ့ ကျွန်တော်ကြားမှာ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ အချက်က
ဘယ်Chanel မှာဘယ်လောက်ရရ သီချင်းကြေးဆိုပြီး ကျွန်တော်မယူသလို.
ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ ခွေတိုင်း သူတော်တော်အာင်မြင်နေပြီဖြစ်တဲ့ အချိန်ထိကို
ကျွန်တော်လည်း ဆိုခဆိုပြီး သူကိုတစ်ခါမှမပေးဘူးပါဘူး။
မှတ်မှတ် ရ ရ FM မှာ ပထမ ဆုသူဆုရတော့ အရမ်းပျော်ပါတယ် ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော်နာမည်များ ကျေးဇူးတင်စကားမှာ ထည့်ပြောမလားဆိုပြီး နားထောင်နေခဲ့ပါတယ်။
FMတိုင်း ဆုပေါင်းမျာစွာရတဲ့ အချိန်တိုင်းလည်း ကျွန်တော်ပွဲထဲမှာရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ပြောမလားမသိဘူးဆိုပြီး အမြဲနားစွံ့ နေမိပါတယ်။ မပြောတာလည်း နားလည်ပါတယ်။ Stage ပေါ်မှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ တစ်ခါမှ ငါတင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ အသုံးနှုန်းမသုံးဖူးပါဘူ။ ငါ့ကူညီခဲ့တဲ့ ငါခေါ်လာတဲ့ ငါညီမ ဆိုပြီး ကျွန်တော်လည်း ဂုဏ်ယူချင်တာပေါ့နော် ။
ဒီ ၆ လ ၇ လအတွင်းဘာဖြစ်လည်း မသိဖုန်းဆက်ရင်
ကိုယ်တိုင်မကိုင် ပြန်မဆက် သူတစ်ယောက်ထဲကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး လုပ်တတ်တဲ့လူတွေ Manager လိုလူတစ်ယောက်ကိုင်တယ် မအားပါဘူးပေါ့ တကယ်မအားတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် Respect ပြန်ဆက်ရမယ်လေ မေ့သွားတာလည်း ဖြည့်တွေးလို့ရတယ် ဒါပေမဲ့ ၇ခါ ၈ခါ ကျတော့လည်း ဒါစောက်ရူးလို့ သတ်မှတ်တယ် လို့ပဲခံစားရတော့တယ်။
လူကြမ်းတစ်ယောက် အသည်းကွဲခြင်း Song MTV ရိုက်ဖို့လည်း မဆက်တော့ပါဘူး ။ သူရိုက်ဆိုတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ ၁နှစ်ကျော် အချိန်က ကျွန်တော်ဘက်က မရိုက်နိုင်သွားဘူး။ ဒါလည်း ဘာမှမှမဟုတ်တာ။
သူငယ်ချင်းတွေ မေးလိုက်တယ် နီနီခင်ဇော်ပွဲမှာ မင်းမလာဘူးလား မေးတဲ့လူနဲ့ Fb Chatbox မှာလည်း မနီပွဲ ကိုယုန်လေးနဲ့ ဆိုမှာလား မေးတဲ့လူနဲ့ ကျွန်တော်လည်း မဖြေရှင်းတော့ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ စိတ်တော်တော်ထိခိုက်တယ် ဘယ်ခွေထွက်ထွက် နှုတ်ခမ်းနီ ထုပ်ထုပ် မွေးနေ့ တစ်ခါမှ အသိမှတ်ပြု ချင်မခံခဲ့ရဘူး။
မနေ့ က တစ်ကိုယ်တော် Show ဆိုတာတော့ အဆိုတော်တွေရဲ့ အိမ်မက်ပဲ သတိရသင့်တယ် အသိမှတ်ပြုသင့်တယ်ထင်ပါတယ်။
တွဲဆိုဖို့ မလိုပါဘူး .
ဘာကူပေးရမလဲပေါ့နော် ကျွန်တော်လည်းဒီလောကထဲ ဘာမှမသိတဲ့လူတစ်ယောက်မှမဟုတ်တာ။
သူဖိတ်လို့ Show ထဲမှာကျွန်တော်ရှိနေလဲ သူ့အတွက် အနှောင့်ယှက်ဖြစ်စရာ ဂုဏ်ငယ်စရာလည်း မရှိပါဘူး။
ဘာပွဲ ဖြစ်ဖြစ် . Pre Party .
သူနဲ့ နာမည်ရှိမှ စသိလာတဲ့ လူတွေကို ပဲအသိမှတ်ပြုတော့တာ တော်တော်လေး စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ ကျွန်တော်အရိုင်းစိုင်း ဒေါသကြီးတဲ့ လူတစ်ယောက်ပါ ဒီstatus ကိုရေးတာ ဒေါသလုံးဝမပါပဲ စိတ်မကောင်းချင်းသက်သက်ပါ။
တစ်ခုပဲ ကိုယ်ဟာကို ဖြည့်သိမ့်လိုက်ပါတော့တယ်။
ငါ ကကွင်းထဲ ဝင်မှမကန်ရတော့တာ အရံခုံမှာ ထိုင်နေရတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ။ ကျွန်တော်လည်း ဒီနှစ်ပိုင်းတွေ
လူတိုင်းက လက်ရှိအခြေနေ အနေထားတွေပေါ်မှာပဲ ဆက်ဆံသွားတယ်ဆိုတဲ့ သင်ခန်းစာလေးရပါတယ်။
အမြဲခံယူထားတာတော့ အရည်ချင်းရှိတဲ့ လူအတွက် တစ်နေရာက တော့အမြဲတန်းရှိပါတယ် ။
ဆက်လက်လည်း အောင်မြင်မှာပါ ။
Kyaw Phone Aung
ညီမလေး နီနီခငျဇျော သိစရေနျ .
Melody World မှာဆုစမရခငျထဲက 2007 2008 လောကျက Dinnerပှဲလေးတဈခုမှာ Jenny အသံကောငျးတယျဆိုပွီး မိတျဆကျပေးလို့ ကြှနျတျောနဲ့စရငျးနှီးခဲ့ပါတယျ.
တှဲဆိုခဲ့ပါတယျ။ အသဈဆိုတာကို မယုံနိုငျအောငျ တျောတျောကောငျးပါတယျ။ ကြှနျတျောလညျး သီတငျးကြှတျလပွညျ့နေ့ Show မှာဆိုဖို့ ပွောခဲ့ပါတယျ။
လိုကျဆိုပေးပါတယျ။ ကြှနျတျော ဒီကောငျမလေး ထိပျဆုံးရောကျမယျဆိုတာသိပါတယျ။ သူဆုမရခငျထဲက ပထမဆုံး Show ပထမဆုံး သီခငျြး ကိုယျပိုငျသီခငျြးတဈပုဒျ ကိုစလုပျပေးခဲ့ပါတယျ။ Melody World စာခြုပျ အရသာ သူတဈခွားသီခငျြး အရငျထှကျခဲ့ပါတယျ။ ကြှနျတျော ညီမအရငျးတဈယောကျလို အမွဲတနျးသူကို ပရိတျသတျသိဖို့ အောငျမွငျဖို့ ခေါငျးထဲအမွဲထဲခဲ့ပါတယျ။
ကြှနျတျော ညီမလေး အရငျလို အရမျးခဈြပါတယျ။
အနျတီ နီကိုလညျး အဒျေါလိုခဈြပါတယျ။ မိသားစုတှပေါ။
မိုးတိမျကဗြာကို မငျးအတှကျ ၃ မှာထညျ့ဖို့ အတှကျ Ezy ကကြှနျတျော အဈကို ကိုကြျောဇငျသိနျးကို အသညျးအသနျပွောခဲ့ရပါတယျ။ အသံကွောငျ့ အဆိုတျောအသဈဖွဈနလေို့ မဟုတျပါဘူး။ ဆိုပွီးသားသီခငျြး သီခငျြးဟောငျးဖွဈနလေို့ပါ။ ဒါပမေဲ့ သူအသံနဲ့ လိုကျတာာရယျ အသံပါဝါ ကောငျးတာရယျ
ကွောငျ့ ပွနျဆိုစခေငျြတာပါ။ ရသ နဲ့ပဲ ပွနျတှဲပေးခဲ့ပါတယျ။ ရသ Rap လညျးအရမျးကောငျးလို့ ။
နာမညျတှတေော့ ထညျ့မပွောတော့ဘူး အဲ့ခြိနျတုနျးက အောငျမွငျစပွုတော့မဲ့ အခု အောငျမွငျနတေဲ့ ကြှနျတျောညီလေးတှနေဲ့ တှဲဆိုဖို့တှလေညျး
စီစဉျပေးခဲ့ပါတယျ။ ဝငျဆနျ့အောငျ . ဒီလောကမှာ ဘယျလောကျတျောတျော တဈယောကျထဲနလေို့မရပါဘူး။
အမွဲတနျး ကြှနျတျောနားမှာရှိတဲ့ လူတှကေို ကြှနျတျော တဈယောကျထဲ အတှကျမရှငျသနျခိုငျးပါဘူး။
သူတို့ အတှကျပဲ သူတို့ကိုရှငျသနျခိုငျးတာပါ။
*** ငါနဲ့ပဲ ဆိုရမယျ။ ဟိုလူ နဲ့ မဆိုရဘူး ဒီလူက နငျကိုနငျးမှာတို့ အကြိုးအမွတျဘယျလောကျရမှာလဲတို့ နငျ ကိုလာမှီပွီးသူတကျမှာတို့ *** လူစောကျမွငျကတျပွီး မတကျခငျထဲကပွုတျကမြဲ့ အတှေးတှေ Psycho မထညျ့ပေးခဲ့ပါဘူး အဲ့ဒါ လူတိုငျးကိုပါ ။Snare ကို ကိုစိုငျးထုပျပေးမယျဆိုတော့လညျး လုပျရမယျ လုပျရမယျ ဆိုပွီး ထိပျဆုံးကပွောခဲ့တာပါ။ Snare နဲ့က အဲ့အခြိနျတုနျးက တဈအိမျထဲနနေကေတြဲ့ အခုခြိနျထိ အခဈြဆုံးကောငျတှပေါ။
NiNi MRTV4ကရိုကျမယျ့ Show တှလေညျး ပိုကျဆံနညျးနညျး မြားမြား လူနဲ့ သီခငျြးနဲ့ တှဲ သိဖို့ ဆိုစခေဲ့ပါတယျ။
သူနဲ့ ကြှနျတျောကွားမှာ ခဈြဖို့ကောငျးတဲ့ အခကျြက
ဘယျChanel မှာဘယျလောကျရရ သီခငျြးကွေးဆိုပွီး ကြှနျတျောမယူသလို.
ကြှနျတျောလုပျတဲ့ ခှတေိုငျး သူတျောတျောအာငျမွငျနပွေီဖွဈတဲ့ အခြိနျထိကို
ကြှနျတျောလညျး ဆိုခဆိုပွီး သူကိုတဈခါမှမပေးဘူးပါဘူး။
မှတျမှတျ ရ ရ FM မှာ ပထမ ဆုသူဆုရတော့ အရမျးပြျောပါတယျ ကြှနျတျောလညျး ကြှနျတျောနာမညျမြား ကြေးဇူးတငျစကားမှာ ထညျ့ပွောမလားဆိုပွီး နားထောငျနခေဲ့ပါတယျ။
FMတိုငျး ဆုပေါငျးမြာစှာရတဲ့ အခြိနျတိုငျးလညျး ကြှနျတျောပှဲထဲမှာရှိနခေဲ့ပါတယျ။ ဒီတဈခါတော့ပွောမလားမသိဘူးဆိုပွီး အမွဲနားစှံ့ နမေိပါတယျ။ မပွောတာလညျး နားလညျပါတယျ။ Stage ပျေါမှာ ဖွဈတတျပါတယျ။ တဈခါမှ ငါတငျပေးတယျဆိုတဲ့ အသုံးနှုနျးမသုံးဖူးပါဘူ။ ငါ့ကူညီခဲ့တဲ့ ငါချေါလာတဲ့ ငါညီမ ဆိုပွီး ကြှနျတျောလညျး ဂုဏျယူခငျြတာပေါ့နျော ။
ဒီ ၆ လ ၇ လအတှငျးဘာဖွဈလညျး မသိဖုနျးဆကျရငျ
ကိုယျတိုငျမကိုငျ ပွနျမဆကျ သူတဈယောကျထဲကိုပွောတာမဟုတျဘူး လုပျတတျတဲ့လူတှေ Manager လိုလူတဈယောကျကိုငျတယျ မအားပါဘူးပေါ့ တကယျမအားတာဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ တဈယောကျကိုတဈယောကျ Respect ပွနျဆကျရမယျလေ မသှေ့ားတာလညျး ဖွညျ့တှေးလို့ရတယျ ဒါပမေဲ့ ရခါ ၈ခါ ကတြော့လညျး ဒါစောကျရူးလို့ သတျမှတျတယျ လို့ပဲခံစားရတော့တယျ။
လူကွမျးတဈယောကျ အသညျးကှဲခွငျး Song MTV ရိုကျဖို့လညျး မဆကျတော့ပါဘူး ။ သူရိုကျဆိုတဲ့လှနျခဲ့တဲ့ ၁နှဈကြျော အခြိနျက ကြှနျတျောဘကျက မရိုကျနိုငျသှားဘူး။ ဒါလညျး ဘာမှမှမဟုတျတာ။
သူငယျခငျြးတှေ မေးလိုကျတယျ နီနီခငျဇျောပှဲမှာ မငျးမလာဘူးလား မေးတဲ့လူနဲ့ Fb Chatbox မှာလညျး မနီပှဲ ကိုယုနျလေးနဲ့ ဆိုမှာလား မေးတဲ့လူနဲ့ ကြှနျတျောလညျး မဖွရှေငျးတော့ပါဘူး။
ဒါပမေဲ့ စိတျတျောတျောထိခိုကျတယျ ဘယျခှထှေကျထှကျ နှုတျခမျးနီ ထုပျထုပျ မှေးနေ့ တဈခါမှ အသိမှတျပွု ခငျြမခံခဲ့ရဘူး။
မနေ့ က တဈကိုယျတျော Show ဆိုတာတော့ အဆိုတျောတှရေဲ့ အိမျမကျပဲ သတိရသငျ့တယျ အသိမှတျပွုသငျ့တယျထငျပါတယျ။
တှဲဆိုဖို့ မလိုပါဘူး .
ဘာကူပေးရမလဲပေါ့နျော ကြှနျတျောလညျးဒီလောကထဲ ဘာမှမသိတဲ့လူတဈယောကျမှမဟုတျတာ။
သူဖိတျလို့ Show ထဲမှာကြှနျတျောရှိနလေဲ သူ့အတှကျ အနှောငျ့ယှကျဖွဈစရာ ဂုဏျငယျစရာလညျး မရှိပါဘူး။
ဘာပှဲ ဖွဈဖွဈ . Pre Party .
သူနဲ့ နာမညျရှိမှ စသိလာတဲ့ လူတှကေို ပဲအသိမှတျပွုတော့တာ တျောတျောလေး စိတျမကောငျးဖွဈမိတယျ။ ကြှနျတျောအရိုငျးစိုငျး ဒေါသကွီးတဲ့ လူတဈယောကျပါ ဒီstatus ကိုရေးတာ ဒေါသလုံးဝမပါပဲ စိတျမကောငျးခငျြးသကျသကျပါ။
တဈခုပဲ ကိုယျဟာကို ဖွညျ့သိမျ့လိုကျပါတော့တယျ။
ငါ ကကှငျးထဲ ဝငျမှမကနျရတော့တာ အရံခုံမှာ ထိုငျနရေတဲ့ လူတဈယောကျကို ။ ကြှနျတျောလညျး ဒီနှဈပိုငျးတှေ
လူတိုငျးက လကျရှိအခွနေေ အနထေားတှပေျေါမှာပဲ ဆကျဆံသှားတယျဆိုတဲ့ သငျခနျးစာလေးရပါတယျ။
အမွဲခံယူထားတာတော့ အရညျခငျြးရှိတဲ့ လူအတှကျ တဈနရောက တော့အမွဲတနျးရှိပါတယျ ။
ဆကျလကျလညျး အောငျမွငျမှာပါ ။